बलिउड अभिनेत्री मौनी रोयले पनि गरिन् इंगेजमेन्ट, को हुन् त उनका मंगेतर ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/बलिउड अभिनेत्री मौनी रोयले पनि गरिन् इंगेजमेन्ट, को हुन् त उनका मंगेतर ?
एजेन्सी । पछिल्लो समयमा बलिउड कलाकारहरुको इंगेजमेन्ट र विबाह गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । यस्तै होडबाजी चल्ने क्रममा भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार बलिउड अभिनेत्री मौनी रोयले पनि इंगेजमेन्ट गरेको तस्वीर आफ्नो अफिसियल इंस्टाग्राममा पोष्ट गरेकी छन् ।
अभिनेत्री मौनी रोयले डायमंड रिंग लगाएर फोट पोष्ट गरेकी हुन् । उनको यो तस्वीर पोष्ट भएसंगै मौनीले कोसंग इंगेजमेन्ट गरिन् त ? भन्ने प्रश्न उनका सबै साथीभाईहरु र फ्यानस्हरुमा उब्जिएको छ । तर मौनीले कसैसंग पनि इंगेजमेन्ट भने गरेकी रहीनछिन् । यो कुरा उनले पोष्ट गरेको तस्वीरसंगैको स्टेटस्बाट थाहा हुन्छ । वास्तवमा अभिनेत्री मौनी रोयले आफ्नो पोष्टको माध्यमबाट एउटा ब्राण्डको बारेमा प्रमोट गरिरहेकी थिईन् ।
यो ब्राण्ड प्राय इंगेजमेन्ट रिंग्स् बनाउनकोलागी प्रचलित रहेको छ । मौनीले त्यही ब्राण्डको प्रचार गरेकी मात्र हुन् । तर उनले आफुले डायमण्डको रिंग्स लगाएर खिचेको फोटो जब आफ्नो इंस्टाग्राममा पोष्ट गरिन् तब भने उनका फ्यान्सहरुलाई एक प्रकारको झट्का लागेको थियो । मौनीले अचानक कोसंग इंगेजमेन्ट गरिन् भनेर उनलाई धेरैले कमेन्टमा प्रश्न गरेका छन् ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
ग्याँसको सिलिन्डरमा यसरी हुन्छ ठगी, एकै सिलिण्डरमा साडे तीन केजीसम्म कम!